‘कबड्डी ३ बाट प्रदीप निकालियो भन्नु हावा हो’ : रामबाबु « Ramailo छ
रामबाबु गुरुङले निर्देशन गर्न लागेको फिल्म ‘कबड्डी ३’ प्रदिप खड्का हुने चर्चा लामो समय देखि चलिरहेको थियो । प्रदिपको ‘लभ स्टेसन’ सोचे जस्तो नचलेपछि रामबाबुले उनलाई फिल्मबाट हटाएको खबर बाहिरिएको छ । के यो खबर सत्य हो त ? के भन्छन् त प्रदीप र रामबाबु ?
प्रदिपले समय नभ्याएर फिल्म खेल्न असमर्थन भएको बताए । उनले भने, ‘रामबाबु दाईसँग कुरा भएको हो । तर मैंले फिल्मको स्क्रिप्ट पनि पढेको छैन । उहाँ साईली फिल्ममा व्यस्त हुनु भएर बाँकी केहि कुरा फाइनल भएको थिएन । उहाँले फागुन चैतबाट फ्लोरमा जाने कुरा गर्नु भएको थियो । तर अहिले वैशाख देखि छायांकन सुरु गर्ने कुरा आएको छ । त्यस समयमा ‘प्रेम गीत ३’को पनि छायांकन हुँदैछ । त्यसैले कबड्डी खेल्न भ्याउँदिन भनेको हो ।’
निर्देशक गुरुङले प्रदिपको अझै पनि सम्भावना रहेको बताउँदै भने, ‘प्रदिपसँग फिल्मको बारेमा कुरा भएको हो । तर कोहि कलाकार पनि फाइनल भएका छैनन् । अहिले म उपत्यका बाहिर छु । एक सातापछि फिल्मको कलाकार कास्ट गर्छु । प्रदिपको समय मिल्यो भने हुन पनि सक्छन् । प्रदिपको हिजो जति सम्भावना थियो, आज पनि त्यति नै छ । हेरौं के हुन्छ ?’ तर लभ स्टेशनका कारण प्रदीपलाई कबड्डी सिरिजबाट हटाइएको भन्ने खबर हावा भएको निर्देशक गुरुंगले बताए । ‘यस्तो हावा समाचार कहाँ बाट आउँछ ? म आफैंपनि चकित छु’, गुरुङ भन्छन ।
फिल्मको लागि दयाहाङ राई, कर्म, बुद्धि तामाङ लगायत कलाकार मौखिक रुपमा फाइनल भैसकेका छन् । साथै फिल्ममा नायिका उपासना सिंह ठकुरी पनि हुने चर्चा रहेको छ । यो फिल्म वैशाखको अन्तिम साताबाट फ्लोरमा जाने तयारी रहेको छ ।